कोरोना लागेको थाहा पाएपछि टोलका मान्छेले झ्यालबाट हेर्नसमेत दिँदैनन् – Khabar PatrikaNp
कोरोना लागेको थाहा पाएपछि टोलका मान्छेले झ्यालबाट हेर्नसमेत दिँदैनन्
August 2, 2020 208
मेरो कोठा टोखामा थियो । कोठामा पुग्दा घरबेटीदेखि टोल छिमेकसम्मले मेरो परिवारलाई छिःछिः दुरदुरको व्यवहार गरिरहेको पाएँ । श्रीमतीलाई सुत्केरीको सकस त छँदै थियो । कोठामा थप १४ दिन आइसोलेसन सकेपछि म बाहिर निस्किएँ । घरबेटीले अर्को तला जान दिएनन् । घरबेटी बोल्न पनि छाडे । केही दिनपछि त कोठा छाड्नू भने । लकडाउनले चहलपहल थिएन । कोठा खोज्न कहाँ जानु ? कोठाका सबै सामान गोंगबु चोकमा रहेको मेरो अफिसमा लगेर राखें । अनि मोटरसाइकलमा एकमहिने बच्चा च्यापेर पर्वतस्थित घरमा आएँ । हामी संक्रमित भएको यहाँ कसैलाई थाहा छैन । काठमाडौं रहँदा मेरो परिवार र मैले भोगेको दुर्व्यवहार भनिसाध्य छैन । अवस्था सामान्य भएपछि मात्रै काठमाडौं आउँछौं । अहिले आएर पनि के गर्नु ? कोठा पाइँदैन ।(कुराकानीमा आधारित)
Prevकोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि अस्पतालमा आइसियू र भेन्टिलेटरको अभाव देखिन थाले
Nextकोरोना संक्रमितलाई उपचारका लागि आइसोलेसनमा नभई खोरमा खाँदेर राखेको : कष्टकर भोगाइ
मलाई माफ गरिदिनु छोरी’ भन्दै बिहेको कार्डमा नोट लेखेर बुवाले गरे यसरी देह त्याग
साउदीमा अरबमा शाही परिवारका राजकुमारसहित कैयौं अधिकारीहरूको प’द खो’सियो !
पिडित बालिका सहयोग रकम लिन पुजा कै घर पुग्दा पुजा फरार